एकले अर्कोलाई सम्मान गरेर समाजमा मिलेर बस्नुनै सहि अर्थमा मानवता को सच्चा प’रिचय हो : नारायण धिताल – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
एकले अर्कोलाई सम्मान गरेर समाजमा मिलेर बस्नुनै सहि अर्थमा मानवता को सच्चा प’रिचय हो : नारायण धिताल
नेपालमा केहि बर्स अघि बि’नासकारी भुकम्प जादा के धनि के गरिब, हामी समाजले छु’टायकाे अनेक जाति , सम्प्रदाय ,बिबिध धर्मलम्बि हरु समान यौटै छत मुनि बस्न सिकायो हामि सबै यौटै रहेछौ भन्ने मह्शुस गरायो , फेरि अहिले महामारी कोरोना भा’ईरष ले यौटा ब्याक्ती को त कुरै छाडैा बिश्वकै धनि , शक्तीशाली देशहरु को निद हराम बनाईदिरहेको छ , कसैसङ रो’क्ने शामर्थ्य छैन न पैसा , न पावर न पद न रुप कसै सङ यस्लाई थेग्न सक्ने है’सियत छैन !
यस्तो बिकराल परिस्थिति मा भ’गवान लाई प्रार्थना र आफ्नो सजकता अपनाउने भन्दा बाहेक अरु केहि गर्न सकिदैन ! यस्तो बिसम स्थितिमा पनि मानिसहरु को दम्भ र घ’मण्ड अझै देख्दा अचम्म लागेर आउछ यो हाड र छालाले बनेको शरिर को कति घ’मनड गर्नु …? केहि दिनको पाहुना हौ हामि सबै यो सन्सारमा कति बेला यहा के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन !
यहा मै हु भन्ने राजा महाराजा हरु ले पनि खालि हात सन्सार छाडेर गएको देखियो ! यो सन्सारै तिम्रै हो भनेर दान दिए पनि , सम्सारै जिते पनि केहि केहि हुने वालै छैन ! यस्तो सोच्नै नसकिने अनेकौ भ’बितब्बे जिवनमा आई पर्दछ अनि त्यति बेला के गर्न सक्छौ ति घमण्ड र अहमता ले ?
प्रत्यक मानिसमा भगवानले केहिन केहि आफैमा यौटा अदभुद क्षमता दिनुभएको हुन्छ ! एकले अर्कोलाई सम्मान गरेर समाजमा मिलेर बस्नुनै सहि अर्थमा मानवता को सच्चा प’रिचय हो तर अफसोच कहा बाट आउछ मानिसमा यति धेरै घ’मण्ड …? सबै जना भगवान बुद्ध , मदर टेरेसा र महात्मा गान्धि बन्न सक्दैनन के बन्न नसक्ने हरुको यो सनसारमा बाच्नुको कुनै अर्थै रहदैन ? यदि यस्तो सोच कसैमा छ भने उस्को यौटा दम्ब र अज्ञान बाहेक अरु केहि होइन !
छुद्र शब्द ले अरुलाई होच्चाएर , मन दुखाएर आफै मै हु भन्ने सस्कार जिवनमा कैले पनि सिकियन र जान्दा पनि जानियन र जिवनमा त्यस्तो भावना कै’ल्यैई नाआओस पनि ! सबै लाई सम्मान छ , आदरभाव छ प्रत्यक मान्छे भगवान स्वरुप हुनुहुन्छ यो महामारि रोग चाडै नै समाप्त होस भन्दै भगवान सङ प्रार्थना गर्दछु ! सबैको मङल होस !!
Previous अरुको रंग , ढंग, बोली, ब्यबहार र छालाभित्र आफ्नो प्रतिबिम्ब बेचेर रित्तिएको समाजको प’लायनबादी चेहरा म हैन : ज्वाला संग्रौला
Next हाम्रा देशका शा’सकहरु सम्झंदा नि मु’टु फु’ट्ला जस्ता : विनोद त्रीपाठी